आज मकर संक्रान्ति, किन भनियो यो दिनलार्इ माघे संक्रान्ति ? – Online National Network
आज मकर संक्रान्ति, किन भनियो यो दिनलार्इ माघे संक्रान्ति ?
१ माघ २०७४, सोमबार ०४:१२
काठमाडौं, १ माघ – माघे संक्रान्तिको अवसरमा काठमाडौंको टुँडिखेलमा थारु र मगर समुदायले विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् । माघे संक्रान्तिको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक विदासमेत दिएको छ । चाकु, तरुल र तिलको लड्डुजस्ता खानेकुरा खाएर आज माघे संक्रान्ति पर्व मनाइँदैछ । हरेक वर्ष माघे संक्रान्तिलाई विशेष रुपमा मनाउने चलन छ । विभिन्न जातीय समुदायले यसलाई भिन्नभिन्न तरिकाले मनाउँछन् ।
माघे संक्रान्तिदेखि सूर्य धनुबाट मकर राशीमा प्रवेश गरी उत्तरायण हुने हुनाले यसलाई मकर संक्रान्ति पनि भनिन्छ । माघ १ का दिन तिलौराको रुपमा तिल दान गर्ने चलन छ, जुन सुन दान गरिएसरह हुने धर्मशास्त्रमा उल्लेख छ । धर्मसिन्धुमा भनिएको छ ‘माघे संक्रान्तिमा जसले तिल, घिउ, चाकु, तरुल आदि खाँदैन, जलाशयमा स्नानसमेत गर्दैन, तीर्थध्यान गर्दैन, त्यो व्यक्ति जन्मभर रोगी हुन्छ ।’
जसको उत्पत्ति स्थानीय परम्परा, व्यक्ति विशेष या संस्कृतिद्वारा हुने गरेको छ भने जसको उल्लेख वैदिक धर्मग्रन्थ, धर्मसूत्र तथा आचार संहितामा मिल्ने गरेको छ। यस्ता धेरै पर्वहरु रहेको छ र यसलार्इ मान्ने एउटा नियम पनि रहेको छ। यी पर्वहरुमा सूर्य (चन्द्रको संक्रान्ति तथा कुम्भको अधिक महत्व हुने गरेको छ। सूर्य संक्रान्तिमा मकर सक्रान्तिको महत्व धेरै हुने गरेको छ भने माघ महिनामा कृष्ण पञ्चमीलार्इ समेत केन्द्रीत गरेर मकर सक्रान्ति नेपालसँगै भारतमा समेत मनाइन्छ।